हेमन्तप्रकाश पक्राउः सरकार र प्रहरी प्रशासनले ठूलै सफलता «
हेमन्तप्रकाश पक्राउः सरकार र प्रहरी प्रशासनले ठूलै सफलता
प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार २१:३५
काठमाडौं । नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ११ औं दिनमै शीर्ष नेता मध्येका एक पक्राउ परेका छन् । यसलाई सरकार र प्रहरी प्रशासनले ठूलै सफलता मानेको छ ।
बम विस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै २८ फागुनमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसबेला नै विप्लव समूहका शीर्ष नेताहरुले पक्राउ गर्ने रणनीति बनाइएको थियो ।
पहिलो निशानामा परे, हेमन्तप्रकाश ओली । विप्लव समूहको मध्य कमाण्ड इन्चार्ज रहेका उनले नै १० फागुनमा नख्खुमा भएको बम बिष्फोटको जिम्मेवारी लिएका थिए । त्यसवेलै उनी प्रहरीको नजरमा परेका थिए । तर, कल डिटेलले उनलाई उपत्यकाबाहिर देखाएपछि विप्लवका पूर्वअंगरक्षक सूर्य भुजेल पक्राउ परे ।
त्यसपछि पनि बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका उनी २८ फागुनमा समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पुनः प्रहरीको ‘हिट लिस्ट’मा परे । त्यसक्रममा मंगलबार बिहान उनलाई पछ्याउँदै प्रहरी टोली काभ्रेको काफलडाँडासम्म पुगेको थियो । तर, चार जना पक्राउ पर्दा उनी भाग्न सफल भए ।
काफलडाँडाको त्यो प्रहरी अपरेशनको तीन दिनपछि शनिबार बिहान काभ्रेकै खानीखोला–७, मिल्चेबाट वलीसहित ९ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार विकट क्षेत्र डाँडापारीमा सेल्टर बनाएर बसेको सूचनाका आधारमा सर्च अभियान चलाइएको थियो । शुक्रबार राति प्रहरी टोली त्यसतर्फ गएको थियो ।
स्रोतका अनुसार ५ वटा मोटरसाइकलमा २ जनाको दरले १० जना सिभिल प्रहरी गएको थियो भने त्यसपछि दुईवटा बोलेरो तथा एउटा भ्यानमा प्रहरी टोली खटिएको थियो । त्यही टोलीले स्कपिओ चढेर ललितपुरतर्फ आउँदै गएका हेमन्तप्रकाश वलीलाई पक्राउ गरेको हो ।
‘मुन्धुम’ भनेको दर्शन हो भने ‘स्टार’ भनेको बिचार हो ।”
ऐना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला ! कहिल्यै सोँच्नुभएको छ ? वास्तवमा ऐना सानो
माके (क्रान्तिकारी) र माओवादी केन्द्रबिच माओवादी एकता
काठमाण्डौं । लामो समयदेखि ‘माओवादी एकता अनिवार्यताः कम्युनिष्ट एकता आजको आवश्यकता’ मा जोड दिदै विभाजित माओवादी
महिनौँसम्म धारो बन्द नगर्दा २७ हजार डलर पानीको बिल
पोखरी मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीमा रहेका कानागावा प्रान्तको योकोसुकाका एकजना शिक्षकले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न महिनौँसम्म धारो खुला
अनौठो मन्दिर : जहाँ भगवान हेर्न वर्जित छ, आँखामा पट्टी बाँधेर पूजा गरिन्छ
हिन्दु धर्मावलम्बीहरू भ्गवानको पूजा आराधना तथा दर्शन गर्नका लागि मन्दिरमा जान्छन् । मन्दिरमा हुने देवी
©2022 mundhumstar.com, All Right Reserved